Ukuze ufumane Holland eTulip Season ngo Train ngokwenene elwe kwikhalenda na self-ngokuphathelele umhambi ehlotyeni xa. Ngenyanga okanye ngonyaka, emasimini kwiphondo Flevoland senziwa similise ulwandle entle olukhulu leentyatyambo bala engaphezu kwe-7…
Oololiwe eYurophu into enkulu; siyabathanda komzila zethu, kwaye ndiza khetha phezu naluphi na uhlobo zokuhamba ngalo naliphi na ixesha. Ngaphandle kokuba ukusuka kwindawo A ukuya kwindawo B Niyakhawuleza, ngendlela ekhululekile kwaye zithembeke, there’s so much most of…
I Flam kaloliwe ukusuka Flam ukuya yena kuthiwa omnye awaya kaloliwe intle kwihlabathi yaye siyaqonda isizathu. Uhambo uthatha iyure kuphela kodwa ezinobuhle ngokwenene umoya-ukuthatha. Ungaphoswa le amava xa usiya…
A umgca Uloliwe entsha uye wasungula, ukufihla Azerbaijan, ikarikuni, no Georgia. Umgca luze 820 Km kwaye yokuhlala freights ukongeza oololiwe abasetyenziswa luluntu. Okokuqala, le iya kuba ngabokuqala ukudibanisa eYurophu China xa adlula Russia. The train will operate from…
tips Ukuqeqesha for ojikelezayo Europe kubalulekile ukuba abahambi. Okokuqala, kukho izizathu ezininzi ezahlukeneyo eya eYurophu. Ungafuna ukubona iibhlorho ezintle, kwizikhululo zikaloliwe, kwanobuhle omangalisayo ngokulinganayo. Okanye mhlawumbi uhambela ukubona inkcubeko emangalisayo Italy. on…
Ngokuqinisekileyo Budapest iliziko Hungary. Yinto kwindawo esembindini xa kuziwa ukuba ahambe ngetreyini e Budapest kukho oololiwe ezininzi siyeka. Nangona ezinika ngu Uloliwe e Budapest kwaye ngokubanzi umdla yaye amaninzi amava amatsha ukuba abantu abaninzi,…
Ngokuba zonke bahambi abukhali phandle abafuna ithuba iindawo eYurophu onokulufikelela ngololiwe ngenxa enokuba kunokuba amkele ngoyolo mnandi umdla kaloliwe ngaphezu-moya, nantsi intwana iindaba enkulu uya umthande. uhambo ngololiwe European bakhwele imihla…